नेपालमा भित्रिए हार्ले डेभिड्सनका सस्ता मोटरसाइकल, कति पर्छ मूल्य ? – Clickmandu
नेपालमा भित्रिए हार्ले डेभिड्सनका सस्ता मोटरसाइकल, कति पर्छ मूल्य ?
क्लिकमान्डु २०७६ मंसिर १६ गते १७:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । हार्ले डेभिड्सनको इन्ट्रि लेवल मोटरसाइकल नेपाल भित्रिएको छ । हार्ले डेभिड्सन काठमाडौंको शोरुम गैह्रीधारामा उक्त मोटरसाइकल आइपुगेको हो । हार्लेको इन्ट्रिलेवल मोटरसाइकल अन्र्तगत स्ट्रीट ७५० र स्ट्रीट रड ७५० नेपाली बजारमा भित्रिएको हो ।
आइएमई ग्रुप अन्तर्गत आइएमई अटोमोटिभ्सले नाडा अटो शो २०१८ बाट नेपालमा हार्लेको बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो । यसअघि कम्पनीले आइरन ८८३ र फ्याट व्यय मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आइरहेको छ । ७५० सीसी सेग्मेन्टमा यो मोटरसाइकल २ भेरियन्टमा उपलब्ध रहेको छ । स्ट्रीट ७५० र स्ट्रीट रड ७५० । हाल यो मोटरसाइकल किन्न चाहने ग्राहकले बुकिङ गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।